नेपाली कांग्रेस महाधिवेशन भदौ १६ बाट -
नेपाली कांग्रेस महाधिवेशन भदौ १६ बाट
मनास्लु पाेष्ट २९ जेष्ठ २०७८, शनिबार १८:४३ 170 पटक हेरिएको
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले पार्टीको १४औं महाधिवेशन ९ दिन पर सार्ने भएको छ । वडा अधिवेशन भने एक महिना ढिला अर्थात् साउन ६ बाट सुरु गर्ने महामन्त्रीको प्रस्ताव छ ।
शनिबार बसेको कांग्रेस पदाधिकारी र पूर्व पदाधिकारीहरुको बैठकमा सभापति शेरबहादुर देउवाले महाधिवेशन गरिछाड्ने बताएका थिए । तर पूर्वनिर्धारित मिति असार ७ बाट वडा तहको अधिवेशन सुरु गर्न सक्ने अवस्था नभएको भन्दै महामन्त्रीले कार्यतालिका संशोधन गर्न प्रस्ताव पेश गरेका छन् ।
सहमहामन्त्री डा. प्रकाशशरण महतका अनुसार क्रियाशील सदस्यता छानविनको म्याद २० असारसम्म थप गर्ने प्रस्ताव आएको छ । यो अवधिमा बाँकी रहेको क्रियाशील सदस्यता वितरण तथा नवीकरणका साथै छानविन सक्ने प्रस्ताव छ ।
त्यसलाई २४ जेठभित्र केन्द्रीय कार्यसमितिबाट अनुमोदन गर्ने र साउन ६ बाट वडा तहको अधिवेशन गर्ने प्रस्तावमा उल्लेख छ । केन्द्रीय महाधिवेशन भने भदौ १६ देखि १९ गतेसम्म गर्ने महामन्त्रीको प्रस्ताव रहेको सहमहामन्त्री महतले बताए ।
यसअघि महाधिवेशनको मिति भदौ ७ देखि १० गतेसम्म तय भएको थियो ।
जसपाको पक्षमा खुले रेशम
जसपा विवाद चर्किंदै :
सम्भोग बढी, झगडा कम : डेढ वर्षमा कोरोनाले कति फेरिदियो जोडीको यौनजीवन ?
सयौँ पर्यटकबीच जोडीको अश्लील हर्कत, चप्पलले हानेर भगाइयो
‘सहयात्री’ नविन गुरुङ र सीता तमुस्याे ’दोङ’को ‘क्याहो तिम्रो पारा’ सार्वजनिक (भिडियाेसहित)
मनबहादुर पुनद्वारा रचना/संगीतबद्ध राष्ट्रिय गीत ‘मेरो प्यारो नेपाल’ सार्वजनिक (भिडियाेसहित)
सुजन बराईलीले ल्याए समय सान्दर्भिक मर्मश्पर्शी गीत “शोकले मरिन्छ की भोकले”
टाउको र छाती नरहेको शरीरको आधा भाग भेटियो
एक युवतीको महत्वाकांक्षा र भाडाको कोख ‘मिमी’
जसपाको पक्षमा खुले रेशम चौधरी
गोरखामा सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दा बढे